Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ahoana no hamantarana mora ny dia maharitra
Ny programan'ny Pioneering Travel Sustainable dia tafiditra kokoa amin'ny karazana fananana rehetra maneran-tany ary manamora ny fitadiavana fampahalalana maharitra azo itokisana ho an'ny mpanjifa.
Travel Sustainable badge, fepetra azo itokisana sy mifandraika amin'ny tontolo iainana izay hanome fampahalalana tena tiana ho an'ireo mpandeha eran'izao tontolo izao mitady hanao safidy fitsangatsanganana maharitra kokoa. Namboarina ho azo ampiharina amin'ny karazana fananana isan-karazany, manomboka amin'ny trano fonenana, B&B ary trano fialan-tsasatra mankany amin'ny hotely, trano fandraisam-bahiny ary trano hazo mihitsy aza, ary azo ampifanarahana amin'ny zava-misy sy ny fiheverana eo an-toerana, ny hetsika dia voalohany amin'ny indostria.
Raha jerena fa ny 64% amin'ny mpandeha dia milaza fa te hijanona amin'ny trano fonenana maharitra izy ireo amin'ny taona ho avy ary miaraka amin'ny lisitra maherin'ny 28 tapitrisa ao amin'ny Booking.com, ny orinasa dia mahita fotoana lehibe hanehoana bebe kokoa ny ezaka misy fiantraikany ataon'ireo mpiara-miombon'antoka aminy amin'ny famoronana. traikefa maharitra kokoa, ary ho setrin'izany dia manamora ny fitadiavana fomba maharitra hijanonana ny mpandeha. Miaraka amin'ny telo ampahefany (63%) milaza fa mety hifidy trano fonenana manokana izy ireo amin'ny fampiharana ireo fanao maharitra, manome valisoa sy mamporisika ireo mpamatsy handray ny dingana manaraka amin'ny diany maharitra maharitra izy ireo.
"Ny fananganana indostrian'ny fitsangatsanganana tena maharitra dia mitaky fotoana, fandrindrana ary ezaka iraisana, saingy azo atao ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny fanavaozana mitohy, fanohanana mpiara-miasa ary fiaraha-miasa amin'ny indostria," hoy i Marianne Gybels, Talen'ny Sustainability ao amin'ny Booking.com. “Ekenay ny ezaka maharitra ataon'ireo fananana midadasika manerana izao tontolo izao amin'ny fomba azo itokisana sy mangarahara ho an'ny mpanjifa. Ny fanehoana ny fomba fanaony eo amin'ny toerana misy azy dia manamora ny fandraisan'ny tsirairay safidy azo antoka kokoa sy maharitra kokoa amin'ny diany manaraka, na aiza na aiza tiany haleha. Noho izany dia manome aingam-panahy bebe kokoa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay handray ny dingana manaraka mba hiasa maharitra kokoa".